माधव नेपालको दोहोरो चाल : एकातिर ओलीसँग संवाद, अर्कोतिर प्रचण्ड, देउवा र अदालतको सहारा ! - Jyotinews
माधव नेपालको दोहोरो चाल : एकातिर ओलीसँग संवाद, अर्कोतिर प्रचण्ड, देउवा र अदालतको सहारा !
विशेष संवाददाता २०७८ वैशाख ८ गते १८:१७
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलगायत २७ जना संघीय सांसदलाई कारवाही गर्ने तयारी थाहा पाएपछि नेता माधवकुमार नेपाल अप्ठेरोमा परेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा आफूनिकट सांसदहरूलाई फ्लोर क्रस गर्न लगाएर केन्द्रीय समीकरणमा पनि आफू निर्णायक छु भन्ने सन्देश दिएका नेता नेपाललगायत फ्लोर क्रस गर्न सक्ने अन्य २७ जना नेताको सांसदको जागिर खाइदिने धम्की ओलीले माग गरेको स्पष्टीकरण पत्रमा दिइएको छ ।
तर बुधवार राजनीतिमा अचानक नयाँ घटना घटना घट्यो । नेता नेपालका अत्यन्तै विश्वासपात्र मानिने योगेश भट्टराई अपराह्न बालुवाटार छिरे । उनले ओलीसँग माधव नेपाल संवादमै रहन चाहेकाले तत्काल केही कदम नचाल्न आग्रह गरे ।
के भट्टराई ओलीतिर लागिसके ?
भट्टराई स्पष्टिकरण सोधिएका २७ सांसदमध्ये एक हुन् । उनी बालुवाटार छिरेपछि क्याम्प परिवर्तन गर्न खोजेको भन्दै हल्ला चलाइएको छ । तर यथार्थ भने अलि फरक छ ।
भट्टराईनिकट स्रोतको दाबीअनुसार उनी नेता नेपालसँग छलफल गरेरै बालुवाटार गएका हुन् । नेता नेपालको दुतका रूपमा बालुवाटार पुगेका भट्टराईले ओलीलाई भने कन्भिन्स गर्न नसकेको स्रोतको दाबी छ ।
स्पष्टिकरण सोध्नुअघि ओलीले नेता नेपालनिकट सांसदहरूलाई एक-एक गरी फोन गरेर कित्ता क्लियर पार्न चेतावनी दिएका थिए । २७ मध्ये अधिकांश सांसदहरूले ओलीलाई २०७५ साल जेठ २ गतेको स्थितिबाट पार्टी संचालन गरेर एकता जोगाउन आग्रह गरे ।
ओलीले भने पार्टी त्यसभन्दा धेरै अघि बढिसकेको भन्दै कन्भिन्स गर्न खोजेका थिए । ओलीले फोन गरेकामध्ये भट्टराईले ओलीलाई आफू यसबारेमा भेटेरै कुरा गर्ने भन्दै फोन राखिदिएका थिए ।
आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदा या विश्वासको मत लिन खोज्दा नेता नेपाल पक्षीय सांसदहरूले फ्लोर क्रस गर्न सक्ने भय ओलीलाई छ । उनले फ्लोर क्रस हुनुभन्दा अघि नै सांसदहरूलाई कारवाही गर्न चाहन्छन् । तर निर्वाचित सांसदहरूको पद सहजै नजाने राजनीतिक विश्लेषक तथा संविधानविदहरूको दाबी छ ।
भट्टराईलाई ओलीको चेतावनी – ‘मतिर नआए सबैलाई धूलो चटाउँछु !’
नेता भट्टराईले ओलीलाई अन्तिमपटक सम्झाउन आफू बालुवाटार जान तयार रहेको भन्दै नेपाललाई कन्भिन्स गराएका थिए । बालुवाटार जानुअघि उनले करीब २ घण्टाजति नेता नेपाललाई भेटे । भेटमा नेता नेपालले ओली अब कुनै हालतमा नसुध्रिने भन्दै सम्झाउन जानु बेकार रहेको बताएका थिए ।
‘त्यही पनि म अन्तिमपटक प्रयास गर्छु भनेर योगेशजी बालुवाटार जानुभयो,’ भट्टराईनिकट स्रोतले भन्यो । तर बालुवाटारमा परिस्थिति भने सहज भएन । जेठ २ गते फर्किने भट्टराईको प्रस्ताव ओलीले नकारे ।
ओलीले भट्टराईमार्फत आफूतिर नआउने सांसदलाई धुलो चटाउनेसमेत धम्की दिएको स्रोतको दाबी छ । यससँगै ओलीसँग नेता नेपालको अन्तिम संवादको प्रयत्न तुहिएको हो ।
यता नेपाल अदालतमा, उता भट्टराई बालुवाटार !
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसहित केही अन्य नेताहरूका साथमा नेता नेपाल बुधवार अपराह्न सर्वोच्च अदालत पुगे । आफूविरुद्ध कारवाही गर्ने ओलीको निर्णय बदर गर्न उत्प्रेषण मुद्दा लिएर नेता नेपाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । समय नपुगेको भन्दै उनको रिट दर्ता भएन ।
सर्वोच्च स्रोतले नेता नेपालको रिट भोलिमात्र दर्ता हुन सक्ने बताएपछि उनी र उनीसँग गएका नेताहरू फर्के । ओलीले गर्ने कारवाहीबाट जोगिन नेता नेपालले सर्वोच्चको साथ खोजेका हुन् । यद्यपि सर्वोच्चसँग ओलीको ‘सेटिङ’ रहेको हल्लाहरू बाहिर आएका छन् । नेता नेपाल स्वयंले अदालतबाट न्याय पाउने आशा भने राखेका छैनन् ।
देउवाको सहारा खोज्दै नेपाल समूह
वरिष्ठ नेता खनाल र नेपाल मंगलवार साँझ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न पुगे । ओलीलाई जसरी पनि हटाउन माग गर्दै उनीहरूले परिआएमा आफूहरूले फ्लोर क्रस गरेर भएपनि देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने वचन दिएको बुढानीलकण्ठ स्रोतको दाबी छ ।
भेटमा सहभागी भएका एक कांग्रेस नेताले ज्योतिन्यूजसँग भने – ‘उहाँहरू (नेपाल र खनाल)ले कर्णालीको उदाहरण दिँदै केन्द्रमा पनि फ्लोर क्रस गर्ने वचन दिनुभएको छ । परिआएमा ३० भन्दा बढी सांसदहरूले फ्लोर क्रस गर्ने उहाँहरूको दाबी छ । सभापति देउवाले माओवादी केन्द्रसँग सल्लाह गरेर केही दिनमै ओलीको विकल्प खोजिने स्पष्ट पार्नुभयो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने सूचना पाएपछि हठात् संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका थिए । नीति कार्यक्रम तथा बजेटका लागि वैशाख महिनामै अर्को अधिवेशन डाक्नुपर्ने हुन्छ ।
ओलीले अधिवेशन अन्त्य गरिदिएपछि विशेष अधिवेशन बोलाउन समावेदन हाल्ने कि नियमित अधिवेशनमै सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने भन्नेबारे प्रचण्ड र देउवाबीच अहिल्यै सहमति जुटिसकेको छैन ।